Clipcentric: Rich Media uye Vhidhiyo Ad Kubata Management | Martech Zone
clipcentric inopa vashandisi vayo sarudzo yakasarudzika yematemplate uye matemplate anopa kutonga kwakazara pane ese nhanho yekugadzira maitiro zvichikonzera kunyatsoteerera muchinjika-chikuva chakapfuma media midhiya. Zvikwata zveAdhi zvinogona kukurumidza kugadzira uye kukudziridza zvinesimba HTML5 kushambadza zvinomhanya zvisina mushe chero munzvimbo
Dhonza-uye-Kudonhedza Nzvimbo Yekushanda - Intuitively kudhonza uye kudonhedza ad zvigadzirwa mumidziyo-yakatarwa nzvimbo dzebasa kuti utonge zvakakwana, uye kupi izvo zvaunoona ndizvo zvaunowana.
Yakasimba HTML5 Kunyora - Gadzira yakaomesesa HTML5 mifananidzo inoshandisa timeline uye keyframes, izere nezviito, hotspots, uye kudyidzana nezvimwe zvinhu zvekushambadzira.
Zvirongwa zvekugadzira - Chengetedza zvekugadzira kuuraya mu-situ uchishandisa mutengi data mirau yakatarwa panguva yekushambadzira kuvaka kana sekutsanangurwa neicho chaicho-nguva yemukati kana yekunze dhata feeds.
Kuzara Kuchinja - Vaka chero fomati yekushambadzira, kubva pamafomu ekutanga ematemplate kusvika IAB Kukwira Nyeredzi kune ako ega-e-e-mabhokisi mafomati, uye uve nechivimbo ivo vakagadzirira kushandira zvinoteerera pamidziyo yese.
Mafomati anosanganisira mu-banner, inowedzerwa, inoyerera, uye yewadhi kushambadzira yakavakirwa nharembozha, piritsi, desktop, in-app, HTML5 uye vhidhiyo mapuratifomu.
Clipcentric inobvisa mutengo uye zvipingaidzo zvakaomarara zvinowanzobatanidzwa nehupfumi midhiya uye vhidhiyo kushambadzira kugadzirwa, zvichibvumira vatengi vedu kukurumidza kuburitsa zvine simba uye zvinomanikidza zvakapfuma kuratidza kushambadzira mukati-mumba, inotsigirwa nekutengesa kwakasimba uye maturusi ekuzivisa.
VideoAd studio yakagadzirirwa dhonza uye inodonhedza nguva yekugadzirisa iyo inopa vashandisi mukana wekutonga ese maficha evhidhiyo kushambadzira. Isa vhidhiyo zvemukati uye gadzirisa shambadziro ine inofamba giraidhi, kurira mhedzisiro, uye mumhanzi. Gadzira shambadziro kubva pakutanga uchishandisa dhatabhesi yevhidhiyo mavhidhiyo emabhizimusi madiki kusvika epakati.
Clip-centric Timeline Mhariri -Fast uye yakapusa vhidhiyo yekugadzira ine interface yakagadzirirwa dhizaini yekuvaka. Ingo dhonza zvako zvemukati mune yenguva uye wobva wanyatso tarisa kutarisa uye kunzwa.
Media Zvemukati Dhatabhesi - Wana raibhurari yedu yevhidhiyo mavhidhiyo, mimhanzi makwara, mhedzisiro mhedzisiro, uye inofamba giraidhi kuti ibudise yakakwira yekugadzira mavhidhiyo akakosha pasina mari yekugadzira.
Zvichienderana Output - Pasina musanganiswa pinda mavhidhiyo ako mune yako yakapfuma midhiya kushambadzira inovaka, shandira mu-mutsara kune VAST inoenderana vhidhiyo vatambi kana traffic kune terevhizheni zviteshi.
Tags: clipcentricanowedzera vhidhiyo kushambadzirainoyerera vhidhiyo kushambadziramu-banner vhidhiyo kushambadziraakapfuma midhiya kushambadziravapfumi vezvenhau adsvhidhiyo kushambadzira kugadzirwamavhidhiyo kushambadzaWallpaper ads
AdButler: WordPress Yakabatanidzwa Ad Kushandira